Indlela engathanga ngqo yokulungiselela iNgxelo yokuHamba kweMali
Xa ulungisa ingxelo yokuhamba kwemali usebenzisa indlela engangqalanga, icandelo elisebenzayo liqala ngengeniso epheleleyo evela kwingxelo yengeniso, oyilungelelanisayo kuyo nayiphi na into engafakwanga yimali ebetha ingxelo yengeniso. Iigogo zakho ezintathu kukuhla kwexabiso, ukuhlawulwa kwamatyala (ezo zinto zombini ziyintengiselwano engafakwanga yimali), kunye nokufumana okanye ilahleko ekulahleni iiasethi.
Kweli nani lilandelayo, ingeniso iyonke ngama-95,000 eedola, ukuhla kwexabiso kwi-PP & E kungama- $ 4,250, kunye nemali efunyenweyo xa kuthengiswa ezinye izixhobo kufunyanwa i- $ 750. Qaphela ukuba umgca we-net-cash cash owenziwe yimisebenzi yokusebenza (kwaye kufuneka ube) kuyafana nokuba usebenzisa indlela ethe ngqo okanye engathanga ngqo.
Ukufumana kunye nelahleko kwintengiso yeeasethi zihlala zifuna uhlengahlengiso kwinkcazo yokuhamba kwemali ngenxa yokuba inzuzo okanye ilahleko eboniswe kwisitetimenti sengeniso yentengiso kunqabile, ukuba ikho, ilingana nemali efunyanwa yinkampani kwintengiselwano.
Uluhlu lweziyobisi ze-maois
Nawuphi na umahluko xa usebenzisa ngokuthe ngqo ngokuchaseneyo nendlela engathanga ngqo ubonakalisa kuphela kwicandelo lokusebenza. Amacandelo otyalo-mali kunye nezemali alungiselelwe ngokufanayo kusetyenziswa enye indlela.
imbruvica iziphumo ebezingalindelekanga zexesha elide
iziphumo ebezingalindelekanga ze-nyquil
phambili kunye nomthamo weekati
iziphumo ebezingalindelekanga ze-diamox ixesha elide
iphi indawo yecebo lokucoca amafutha
ngaphezulu kwamayeza okubulala iintsholongwane kusulelo lwamazinyo